MA NACAYBKA SOOMAALILAND AYAA SOOMAALIWEYN KEENI DOONA?
RA'YIGA DADWEYNAHA :2001
Waxaa yaab noqotay in inta badan dadka halka wax ku qoraa ay colaad iyo weerar toos ah ku hayaan Somaliland iyo qaara ka mid ah beelah dega dhulkaas, sida Isaaqa. Wax soo hadal qaadaya ma maqlaysid Xamar iyo halaaga ka jira ama dhibaatada joogtada ah ee Cabdilaahi Yuusuf ku hayo Soomaali oo dhan. Qaarkiina waxaad ku hanjabteen inaad Isaaqa ka saari doontaan gobolka Soomaalida ee Itoobiya haysato.
1)Marka ugu horaysa, 80% Isaaqu wuxuu degaa gobolka Soomalida ee Itoobiya haysato. Isaaqa Soomaaliland degaa aad buu u yarhay marka loo eego inta xadka dhaafsan. Sidaad ogtihiina Siyaad Bare oo haystay ciidanka ugu khatarsan wadamada Afrika ayay hadh galay wado cad marsiiyeen, markaa idinkuna maxaad is moodeen?
2) Talabaad mawaxaad is leedihiin caqli xumadiina Isaaq wuxuu raali ka yahay ku xadgub lagu xadgubo dad Soomaaliyeed haday dhabtahayba? Mise dowlada Soomaaliland ayay ka amar qaataan Isaaqa xadka dhaafsani? Saaxiib Isaaqa xadka dhaafsani walaa Somaaliland baanay aqoon walaa in cid Haragaysa laga dhoofiyay ayaanan ogayn. Qaarkood Hargeysa iyo Burco dheguhuun bay ku maqleen.
3) Meel walba waxaad ka ga hadaaqdaan ?Meeday Soomalinimadii, Walaatinimadii iyo Islaanimadii?? Waa suaal, wanaagsan, laakiin Somalinimo iyo walaatinimoy xageed ku maqnayd markii Soomaaliland dadkeeda la xasuuqaya?358000 oo shiicb ah wallaatiinimoy xaageed ku MAAQNAYD
4) Ta afraad hadaad idinkuba dusha ka saarteen Siyaad Bare khasaarihii wadanka gaadhay oo dhan, dadka reer Soomalialand miyaanay xaq ulahayn inay yidhaahdaa Riyaale Kaahin ayaa ka mas uul ah hadii cid la dhoofiyo iyo hadii cid Xabashida loo dhiibaba.
Ugu danbayn, in la is dhaliilo, oo dawlad iyo dad khalad kood faraha lagu fiiqaa xumaan ma aha, laakiin ragiina waa weyn ee aan waxba iskula hadhayn ayaa layaab noqotay. Ogaadana, markaad sii caytantaan ee colaad iyo nacayb mujisaan baa, ree Soomaaliland waxay odhan ?Eeg siday u hadlayaan....waad argrtaan waxaan sheegayay?. Haday dhabatahay oo Soomaalialnd dhibaato ku hayso, dadk aan ka soo jeedin beelaha degaanka dega, taasi waa khalada iyo nus, laakiin idinkuna aflagaadadiina iyo nacaybkiinu waa khalad kale. Markaa makhalad baad isleedihii khalad ku saxa? Mise nacaybak iyo colaada Soomaaliland ayaa midnimo keenin?
sahal samantar gadiid wagaar55@yahoo.com ama